Umhlahlandlela ophelele wokuthuthela eMadolobheni e-Dubai City, Expat usizo ku-UAE 🥇
Joyina i-WhatsApp Group yeMisebenzi e-Dubai City
Igayidi ephelele ukuthuthela e-Dubai
Umhlahlandlela ophelele wokuthuthela e-Dubai. Yenziwe ngokuyinhloko abafuna umsebenzi wezwe ngamazwe. Yini ongayenza ngempela lindela e-Dubai?. Kukhona izinto ezincane kakhulu ongazenza ngaphambi kokuba uthuthele e-United Arab Emirates. Yonke inhloko-dolobha inayo izingosi kanye nokungahambi kahle. Ikakhulu uma ifika ngeMpumalanga Ephakathi. Isibonelo, kufanele ufunde a umhlahlandlela oningiliziwe wokuthola umsebenzi e-Dubai. Ngakolunye uhlangothi, qiniseka ukuthi unayo imali eyanele kanye nesibindi ukuqala izimpilo ezintsha eMiddle East.
Sinikeza umhlahlandlela ophelele wokuthuthela e-Dubai. Ukuthuthela ezweni elisha kuwumsebenzi othakazelisayo novusa amadlingozi. Ngesikhathi esifanayo nesiningi Ukuphelelwa yisikhathi kuthatha lesi sinyathelo ukuthola umsebenzi ngaphandle kolwazi olufanele noma olusebenzayo lokuthi izinto zihamba kanjani endaweni yangakini. Ingabe kunjalo indawo engcono kunazo zonke izivakashi ezivela kuzo emhlabeni jikelele.
Kubalulekile ukuphawula ukuthi ngaphezu kwe-80% ye Dubai's izakhamuzi zikhona uchitha isikhathi sokuphila nokusebenza edolobheni. Lokho kwafika emzini ngaphandle kolwazi olufanele mayelana nokuthi yini okudingeka yenziwe. Ngaphezulu kwe-70% ye Imisebenzi e-Dubai abazingeli basebenzisa i-WhatsApp. Yingakho kuphakanyiswa ngaphambi kokuba uhlele ngaphambi kokuthuthela e-Dubai. Ukuze wazi konke okudingekayo futhi okudingekayo ulwazi mayelana nokuthi izinto zenziwa kanjani kanye nezindlela ezingcono zokuzenza. Lapha sikunikeza nge isiqondiso esigcwele ngoba ukuthuthela e-Dubai.
Izindleko ze Ukuhlala eDubai
Umhlahlandlela ophelele wokuthuthela eDairobi ingabe wena?
Nakuba iDaibhu inikeza imvelo engenayo intela kodwa izindleko uhlala edolobheni angathola imali encane. Ngakho, uma ufuna imisebenzi e-Dubai ukuqala a umsebenzi lapho, khona-ke kudingeka uqiniseke ukuthi umholo wakho uzohlanganisa izindleko zakho zokuphila eziyisisekelo. I-Dubai Area ibhekwa njengedolobha elibiza kakhulu ukuhlala e-United Arab Emirates.
Izindleko ze ehlala e Dubai kunoma yikuphi. Njalo uhlanganise izindlu kanye nokudla ngokudla ngaphandle kwedolobha. Ukuzijabulisa ukuze uthole ukuzijabulisa nokubhalisa izingane zakho ezikoleni. Ngaphezu kwalokho, izinto zokuhamba ngemoto yomshwalense. Konke kufika phakathi kwakho uma wena ukuthuthela e-Dubai njengenxusa laseNdiya.
Kufanele wazi ukuthi izindleko eziqashisayo ngonyaka zokuqasha kwendawo yokuhlala ye-studio zifika ku-62,000 AED. Kufanele uhlole wakho inqubo yokuthola indawo yokuhlala ye studio, ikakhulukazi e-Dubai. Ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nezindleko zokuqasha e-Emirates. Zonke izinto ezicutshangwayo, kufanele zenziwe uma uhamba nomndeni. Nini idlulisela e-Dubai kufanele bazi ukuthi ezinye izindleko ezingaphezulu azikwazi ukugwema uma uhlala e-Dubai. Njengokwenza noma ukuqasha imoto, ukuthenga izimpahla ze-elekthronikhi, ukukhetha izikole ezingcono kakhulu for kids zakho. Ngisho nezikole ezinhle kakhulu zivule entsha Dubai campus ngonyaka ozayo.
Izindleko zokuhlala Dubai, Uzothola uma ufika lapho njengenxusa laseNdiya. Ngokuvamile, kuwukuthi Kubiza kakhulu ukuhlala e-Dubai. Eqinisweni, kuze kube yi-2020 expo amanani azophakama ngaphezu kwezulu. Ngenxa yamaphrojekthi amasha afika e-Dubai. Futhi nokuningi ukhetho olufuna umsebenzi eMelika yase-United Arab Emirates. Ngaphambi kokuthutha hlola umhlahlandlela oningiliziwe nezintengo eziyisisekelo ngezindleko ehlala e Dubai.
Ibhange e-Dubai City
Ukuvula i-akhawunti yasebhange e-Dubai noma e-Abu Dhabi kuncike lapho uhambisa khona kulula kakhulu. Uma kunjalo, ezinye izidingo kudingeka zibe khona, konke kuncike ebhange. Ukuvula i-akhawunti yasebhange ejwayelekile, udinga ukuyivula ube ngumhlali wase Dubai. Kodwa ekugcineni, amanye amabhange avumela ichitha abahlali ukuvula ama-akhawunti wokulondoloza. Kodwa uma kunjalo umenenja wasebhange ubeka umkhawulo obhalansi obuncane okufanele wenziwe. Uzodinga ukuhlinzeka ngemibhalo edingekayo efana Ipasipoti enombhalo wokuhlala, original kanye nekhophi. Futhi kwezinye izimo incwadi evela kumqashi wakho. Ngokuphathelene nalokhu, ayikho impikiswano kusukela kuhulumeni wase-United Arab Emirates.
Umnakekeli emkhakheni weBhange e-Dubai. Ngakolunye uhlangothi, ukuthola okuningi kunzima. Cishe zonke umsebenzi wokufuna umsebenzi wezwa mayelana a umsebenzi wezemali e-Dubai. Ikakhulukazi, mayelana nezikhungo zezezimali ezikhulayo kakhulu. Kodwa hhayi wonke ochwepheshe abenza ngale ndlela kuze kube yimpilo. Isibonelo ezinye izinkampani zobuchwepheshe ezifana Ukukhishwa kwamabhange e-Dubai e-United Arab Emirates. Ngaphansi kwalezo zimo, Kufanele wazi ukuthi ukuthola umsebenzi e-Dubai izikhungo zezezimali ziba nzima ngosuku nosuku.
Isibonelo sokudlulisa ingxoxo kuyo nomphathi webhange. Uzodinga unikeze isitifiketi se-MBA ukuthola umsebenzi e-Dubai. Ngakolunye uhlangothi, ungakwazi njalo ukuqala umsebenzi kwezinye zezikhundla eziyisisekelo. Isibonelo njengomsizi wokuthengisa noma i-cashier. Ohlangothini olubi, uma ungenayo isipiliyoni esanele ebhange.
Abafuna umsebenzi omusha ngeke baqashwe ngokushesha njengoba bacabanga. Ikakhulukazi kunoma yikuphi ukulandela izikhundla zokuphatha. Thomson Reuters kanye UJobe Pro uqasha ochwepheshe abanolwazi ukuze ulayishe okuqhubekayo kwakho.
Ulimi e-United Arab Emirates
Ichitha kusukela ku-85% yabantu base-Dubai lapho ungathola khona abafudukayo abakhuluma iPhilippines. Kanye nesi-Hindi nesi-Urdu nesi-Bengali. Ngaphezu kwalokho, isiTamil, isiTagalog, isiPheresiya, isiShayina, isiMalayalam, ngaphezu kwezilimi eziningi. Futhi nakuba isi-Arabhu yilona ulimi olusemthethweni lwe-UAE, isiNgisi yilona ulimi olukhulunywa kakhulu e-Dubai. Ngakho, imisebenzi e Dubai kungenziwa njengendawo yokusebenza yocingo ku-UAE.
Kukhona izinhlobo ze-4 zesi-Arabhu ezikhulunywe e-Dubai. Futhi yiMaghrebi Arabic, Egyptian Arabic, I-Gulf Arabic neLevantine Arabic. Kodwa-ke, ulimi oludumile kakhulu olukhulunywe eDai Dubai yi-Arabhu nesiNgisi. Njengoba kunikezwe la maphuzu, kuqondwa yizo zonke izikhulumi zesi-Arabhu kukhona i-Modern Standard Arabic. Okuphelele Umhlahlandlela wokuthuthela e-Dubayi kungabe wena?.
Kungakhathaliseki ukuthi ukhuluma ngokushelelayo ngesi-Arabhu noma ngesiNgisi, kuphephile ukusho okuyinto exats okuphilayo futhi njengamanje ukusebenza e-Emirates. Noma ngisho vakashela i-Dubai futhi bahlela ukuya esitejiy ngoba ukhona ufuna Imisebenzi yase Dubai. Ngakolunye uhlangothi, uma ukhuluma isiNgisi. ngeke uhlangabezane nobunzima bokuxhumana nabantu noma omunye nomunye.
E-United Arab Emirates, kunemithetho emikhulu yebhizinisi oyidingayo ukuze ulandele njenge-expat yezokuvakasha. Eqinisweni, kuzodingeka ufunde isiNgisi sebhizinisi. Ikakhulukazi uma ubheka ukuqala ukusebenza ezingeni lokuphatha. Ngendlela, akuyona nje i-Dubai noma i-Abu Dhabi. Udinga ukuba nolwazi olubanzi uma ungathanda ukusebenza kwelinye izwe e-Dubai ikakhulukazi ebhizinisini.
Izimo zezulu e Dubai
Ngaphambi kokuthuthela e-Dubai, izidingo kufanele zikwazi ukuthi idolobha liyashisa. Isikhathi sonke lapho inyanga ka-Agasti yishisa kakhulu inyanga e-Dubai ngokushisa okujwayelekile kwe-36 ° C (96 ° F). Nakuba inyanga kaJanuwari ibhekwa njengenyanga ebanda kakhulu yonyaka ngamazinga okushisa afinyelela ku-19 ° C (66 ° F). Kunzima kakhulu ukuba ujabulele ukuhamba epaki noma ukufaka indebe yekhofi. Ukubeka ngenye indlela, ngaphandle kwesakhiwo yisimo sezulu esishisayo. Yikuphi kwenza kube nzima ukuthi izakhamuzi zijabulele ukuphuma ngaphandle. Izimo zomoya zikhona yonke indawo futhi yingakho seluleka ngokucophelela zonke izidingo nezakhamuzi ukuze ube nejazi kubo ngoba uthola ukushisa ngaphakathi endlini.
Isimo sezulu ikakhulukazi e-Dubai nase-Abu Dhabi. Ngokuvamile, kuyo yonke iholide yonyaka. Wonke umuntu ovakashele i-UAE uyazi Dubai iyindawo enhle yokuhlala. Isimo sezulu sihle kakhulu sokubhukuda nokuthenga. Enye into emangalisayo ongayithola enhlokodolobha ye-United Arab Emirates. Indawo ye-skydiving e-Abu Dhabi noma Izimoto zemidlalo ezimangalisayo zase Dubai. Kuyinto emangalisa wonke umuntu ongathanda ukuzama. Thina kakhulu Kunconyiwe izivakashi ezintsha ukuzama. Ikakhulukazi ehlobo, i-Emirates iyiholide elingaze liphele ngaphansi kwelanga lasezulwini.
Futhi kungakhathaliseki ukuthi uvakashela i Dubai ngebhizinisi noma injabulo, wonke umuntu ufisa ukuthola ukunambitheka kwalokho okuthiwa "Ukwaziswa kwe-Dubai". Ukuthola Kwenzeka kanjani e-Dubai bheka futhi ujoyine i-WhatsApp Jobs Group.
Ukusetshenziswa kotshwala e-Emirates
Abaningi banomuzwa wokuthi Utshwala luhanjiswa ngokukhululekile ku emirate of Dubai. Kodwa iqiniso liwukuthi ukuphuza utshwala emphakathini akungekho emthethweni ngesijeziso esingafinyelela ejele. Ukunikezwa kwala maphuzu utshwala ku-emirate yase-Dubai kuvunyelwe kuphela kumahhotela, emabhasini kanye izindawo zokudlela ezithile kanye nezindawo zokubhuka kuphela.
I-Dubai City yiyona inkolo yamaSulumane, ngakho-ke utshwala abuvunyelwe kakhulu. Ngisho noma ukhona ukufuna umsebenzi eMamirates. Ungakwazi nje ukuziphoqa njengoba abaningi abafuna umsebenzi bekwenza kwamanye amazwe. Vele uye esitolo bese uthatha isiphuzo. Bangu eminye imikhawulo eminingi e-United Arab Emirates ukuthi udinga ukuqaphela ukuthi uqale. Kodwa ngakolunye uhlangothi, ungayisebenzisa i-google. Futhi uma kwenzeka ungene enkingeni ungahlala ukhuluma namaPhoyisa. Ngakolunye uhlangothi, kufanele kube kuhle uma nje uhamba futhi uvakashela i Dubai kuphela.
Umhlahlandlela ophelele wokuthuthela eDairobi kungabe wena ?. Uqinisekile ukuthi awusebenzisi utshwala ?. Ulungele i-Dubai?.
Ukuthuthwa Kwendawo NeDaily City
Ngokuvamile, i-metro e-Dubai ngokuvamile igcwele abagibeli ngesikhathi samahora okuphuthuma okuvela ku-7 kuya ku-10 am no-4.30pm kuya ku-8 pm noma kamuva. Lapho uhamba ngetekisi, isikhathi esihle kakhulu ukuze uthole noma yikuphi ukudla ngokushesha ebusuku lapho imigwaqo ingahlali ematasa. Nokho, kufanele wazi ukuthi noma uhamba ngemoto, ibhasi noma itekisi; Isikhathi lapho imigwaqo ivame ukugqoka khona ngoLwesihlanu ntambama nangomgqibelo ikakhulukazi ezungeze ezitolo ezinkulu, izivakashi ezihamba phambili, kanye nolwandle izimakethe zezimali. Futhi uma ukhona efuna ukuba owesifazane wase-Dubai e-expat. Udinga ukwazi imithetho ethile engasebenza kuwe.
Enye isho ukuthini Ukuthutha kwendawo e-Dubai yi-Tram eqaliswe ku-2014. Njengengxenye yesistimu yezokuthutha yomphakathi edidiyelwe yase Dubai. I-Tram ye-Dubay inikeza abagibeli ukufinyelela kalula kuzo zonke izindawo ezisemqoka edolobheni. Efana ne- I-Jumeirah Beach Residence, i-Dubai Marina, ibhizinisi izindawo kanye nomgwaqo i-Al Sufouh. Kufanelekile ukuphawula nokuthi i-Dubai Tram iphinde ixhumane nesiteshi sesitimela. Ngakolunye uhlangothi, ungakhuluma nezinye izizwe eziningana. Lokhu empeleni futhi uvakashela i-UAE. Isibonelo, ngaphandle kwamaNdiya, kuningi Abantu baseNingizimu Afrika e-Dubai. Ungakwazi ukukhuluma kalula nanoma ubani e-United Arab Emirates ngesiNgisi.
Kukhona i-Dubai Ferry kanye nokuthi yikuphi ukuhamba kwezokuvakasha. Okusho ukuthi kuvumela izivakashi ukubuka idolobha kusukela olwandle kanye ne-mesmerize ezakhiweni zayo ezinhle kakhulu nezakhiwo ezibonakalayo. Kuningi okuningi umsebenzi wokumaketha e-Dubai kwenziwa nguHulumeni wase-UAE. Yiqiniso ukukhuthaza leli dolobha ezimangalisayo. Ngenhloso yokuletha izivakashi eziningi ku-Abu Dhabi nase Dubai.
Indlela yokuthola umsebenzi e-Dubai njengomfokazi?
Ukukhohlwa ukuqashwa e-Dubayi njenge-expat entsha. Ngokuqinisekile, abafuna umsebenzi omusha kudingeka basebenze kanzima nsuku zonke. Ukuze uqhubeke ukuthola isabelo somsebenzi. Ngakolunye uhlangothi, kukhona ukuqashwa okumbalwa amasevisi ongawasebenzisa ukuthola imisebenzi yase-Dubai. Akusona neze isinkwa esilula uthole umsebenzi e-Dubai. Baningi kakhulu abantu ngaphakathi kwe-UAE. Ngubani ongathanda ukuthola amathuba amakhulu okuqasha nge Dubai City Companies? Ngokwalesi sizathu Ukuqashwa kwamanye amazwe e-Dubai liyaziwa kakhulu.
Enye indlela ethandwayo yokuthola umsebenzi e-UAE. Ingabe uya edolobheni, futhi ifuna izingxoxo zokuhamba ngaphakathi e-Dubai. Amakhasimende ethu ancoma kakhulu ubuso bokubhekana nokukhuluma abaphathi bokuqasha. Ngoba uma uzokwazi ukuzithengisa kubaphathi abaqashisayo. Ezimweni eziningi, wena uzophumelela ukulwa.
WhatsApp Recruitment Group luyakhula ngokushesha nsuku zonke. Imisebenzi e-Dubai ngenxa yokukhula ukuqashwa komakhalekhukhwini ukusiza ngaphezulu kwe-50,000 abafuna umsebenzi e-UAE. Iqembu lethu lisungule amaqembu afuna umsebenzi eDubai. Ngokunaka kokusiza abafuna umsebenzi abafuna ukuqala ukusebenza ngaphandle kwamanye amazwe e-Dubai. Ikakhulukazi uma befuna ukuba khona ibekwe ngokushesha e-United Arab Emirates. Ngakho njengoba ufunde umhlahlandlela wethu we-Dubai. Manje kufanele uzame ukuthola umsebenzi wephupho. I-Dubai City ingenye yezindawo ezinhle kakhulu zokuphila. Ngakho kungani ungazami ukuthumela uhlelo lokusebenza. Ithimba le-Dubai City Company lokuqasha. Ingabe njalo kusiza ama-expats ukuba abekwe. Ngakolunye uhlangothi, kufanele ubuke nezinkampani zokuqasha. I-Careerjet futhi I-Monster Gulf. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Umhlahlandlela ophelele wokuthuthela e-Dubayimu kuhle ku-WhatsApp ?.
I-Whatsapp ifuna ukuthola i-UAE
Lona umhlahlandlela ophelele wokuthuthela e-Dubai kuwe !.
E-United Arab Emirates. Ungakwazi thola amaqembu okuqasha naseYurophu ePoland. Amaforamu akhethekile kwabokufika abasha e-UAE. Ngisho nawe ungathola amaqembu ambalwa angasese. Lapho ungathola khona iseluleko mayelana nenqubo yokuqasha enhlokodolobha ye-United Arab Emirates. Ngakolunye uhlangothi, enye yezindlela ezinhle insizakalo yokuqashwa komakhalekhukhwini efuna abaqashi e-Dubai.
Umhlahlandlela ophelele wokuthola inkampani enhle yokuqashelwa e Dubai. Lena indlela uma ufuna ukuthola umsebenzi wokuqala e-UAE. Amaqembu e-WhatsApp angenye yezindlela ezihamba phambili zokuthola umsebenzi e-UAE. Kodwa ungabheka kithi Layisha kabusha kuya esigabeni esisheshayo esivusa amadolobha emhlabeni wonke. Lokhu ngokuqinisekile kuphelele isiqondiso sokuthuthela e-Dubai.
Indlela yokuthola abaqashi abangcono kakhulu ku-Emirates
Kukhona futhi izindlela ezimbalwa zokuthola umsebenzi e-UAE. Kepha kanye AmaNdiya e-Dubai. Kukhona nezinye izizwe ezifuna umsebenzi e-Emirates. Ngokwesibonelo, I-Pakistani efuna imisebenzi e-Dubai. Bakwazi ukuthola umsebenzi ngokusebenzisa izinsiza zethu e-UAE. Ukuthola abaqashi e-United Arab Emirates. Yiba umsebenzi onzima ikakhulukazi ngaphambi kwe-expo 2020.
Ithimba lethu ikakhulukazi ukusebenza ngezindleko ezintsha. Ngenxa yamaphrojekthi we-Expo 2020, kufanele uthathe isinyathelo ngokushesha ukuze uthole umsebenzi.
I-Dubai City Company inayo imisebenzi etholakala Dubai nase-Abu Dhabi lapho ungathumela i-CV. Qiniseka ukuthi uzothumela imininingwane yakho ebuyekeziwe kwenkampani yethu. Ngaphezu kwalokho, i-Dubai iba yindawo evakashelwa kuyo yonke indawo eMpumalanga Ephakathi.